Nepal : Azo tapahina ho mariky ny fanoherana ve ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Nepal : Azo tapahina ho mariky ny fanoherana ve ny Aterineto
Nandika (fr) i Jade Dussart
Voadika ny 03 Mey 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, Español, English
Nikorontana ireo mpiserasera nepaley, raha nahita fa nanapaka ny fidirana amin'ny aterineto ny “Fikambanana Nepaley Mpanome Tolotra Aterineto” (ISPAN) ny alahady 10 aprily 2011 nanomboka tamin'ny 1 ora hatramin'ny 2 ora atoandro mba ho fanehoana ny tsy fankasitrahany ny fepetra ara-pitsarana noraisin'ny governemanta manoloana ny ” fanodinkodinana tsy ara-dalàna ny antso VOIP” (ireo antso an-taroby mampiasa Aterineto).
Tao anatin'ny fanambarana dia niampanga ny Manam-pahefana Nepaley misahana ny Fifandraisan-davitra (NTA) ny ISPAN noho ny fanajanonany sy ny fanendrikendrehana tsy ara-drariny ireo Mpanome tolotra Aterineto ho nanampy ny mpandraharaha “mpanodinkodina tsy ara-dalàna ny antso an-taroby”.
Ny volana lasa teo, nandray karazana fepetra ny NTA mba hisorohana ireo raharaha marobe momba ny “fanodikondinana tsy ara-dalàna ny antso” izay mampiasa ny feo amin'ny Aterineto, na VOIP (Voice over Internet Protocol) , ary manampy ireo mpampiasa izany mba hialàna amin'ny vidiny lafo mahazatra apetraky ny orinasa fifandraisandavitra manana fahazoan-dalana.
Sary noforonin'i Jamarier tao amin'i Flickr (CC BY-SA 2.0).
Nitsikera ny fahatapahan'ny aterineto ny tontolon'ny bilaogy, ary mihevitra fa fanitsahana ny Lalampanorenana vonjimaika izany, izay mifanohitra amin'izao sakana amin'ny fifandraisana izao.
Tsy taitra tamin'ny fihetsiketsehan'ireo mpanome tolotra Aterineto i Nepali :
Misy antony ara-drariny matoa misy ny fihetsiketseham-panoherana, azoko izany. Fa iza anefa no mety hanao fihetsiketsehana hanohitra izay mety ho lazaina fa zava diso nataon'ny polisy raha toa ka misy iray amin'izy ireo tratra ambodiomby ? Ireo mpanome tolotra anay, eny tokoa. Mbola ireo mampiasa ny Aterineto, izaho sy ianao hatrany foana anefa no mizaka ny voka-dratsiny.
Nanao fanamarihana ilay bilaogera :
Zo fototra ho an'ny olom-pirenena nepaley izay voalaza ao amin'ny Lalampanorenana (vonjimaika) ny zo hiditra amin'ny Aterineto. Manosihosy ny zo ananako amin'ny fomba tsy azo ekena, nanapa-kevitra hamono ny “routeurs” (fitaovam-pahazoana serasera amin'ny Aterineto) mandritra ny adiny iray amin'izao antoandro izao ao Nepal ireo ireo mpanome tolotra Aterineto, izay tena nanohina ahy mafy dia mafy.
Manontany tena i Pradeep Kumar Singh hoe nankaiza ny etika amin'izao fahatapahan'ny Aterineto izao :
[..] Mikasika ny ATERINETO ity, ahoana ny ahazoan'izy ireo zo hanapaka ny fidiran'ny olona amin'io tambazotram-pifandraisana io ? Afaka mamboraka na mahavita zavatra marobe ny Aterineto. [..]
Heverin'ny ankamaroan'ny Nepaley ho toy ny rendrarendra na fialam-boly ny Aterineto, saingy tsy midika izany fa tsy miraharaha izany izy. Minoa ahy, mpiserasera marobe no mihevitra fa filàna fototra amin'izao vanim-potoana ianantsika izao ny Aterineto, ary raha miteny izany aho dia matoky fa “filàna fototra” izay heverina fa toy ny efa ananana izy io. Na izany na tsy izany, andry iankinan'ny fampahalalam-baovao ny Aterineto.
XNepali mankasitraka ny fitakian'ireo mpanome tolotra aterineto, ary nilaza ny heviny tamintsika:
Ny hetahetan'ny ISPAN izay mitaky tontolo azo antoka sy lavitry ny tahotra amin'izay mety hetsika tsy ara-drariny ataon'ny polisy dia heveriko fa mari-pototra kokoa. Fa nahoana ireo mpiserasera tsy manana ahiahy no voasazy amin'ny ataon'ny governemanta ?
Yam Gurung nitsikera ny lahatsoratra ao amin'ny bilaogy My Sansar [népaley):
Tsy faly aho fa nofaranan'ny CIB (Credit Information Bureau) ny antso izay nolazaina fa “nahodikodina” ary nisambotra ireo mpiasan'ny Mpanome tolotra Aterineto. Mipetraka ao Hong Kong izahay nandritra ny 15 taona. Tsy afaka mandefa antso mazava sy mora vidy amin'ny fianakavianay ao Nepal izahay raha tsy averina amin'ny laoniny ny antso izay nolazaina fa nisy nanodikodina tsy ara-dalàna ao Nepal. Hatramin'ny nanajanonan'ny CIB ireo mpamatsy aterineto sy ny fikendrena ireo Ivo-toeram-pifandraisana VOIP, dia nanjary lafo vidy ho an'ny olona mpila ravinahitra Nepaley [ireo antso mankany Nepal].
Mangataka an'ny NTA sy ny CIB aho mba handefitra amin'ireo mpandraharaha tsy ara-dalàna amin'ny antso VOIP mba hiasa aloha mandra-pidinan'ny vidin'ny antson'ny Nepal Telecom sy hanatsarany ny tambazotrany mba hampandeha tsara mandrakariva ny fifandrasaina. Iangaviko ianao tompoko, ampio izahay mba ho afaka hifanerasera, na dia eo aza ny halaviran-tany, amin'ireo fianakavianay mipetraka any izay tsy misy fomba ahafahana hifaneraserana mihintsy.
Natsahatry ny ISPAN ny fihetsiketseham-panoherany rehefa nanaiky ny hanadihady ny olana mikasika ny antso VOIP amin'ny Aterineto ny Manampahefana Nepaley misahana ny Fifandraisan-davitra.